Kordhinta ArcGIS - Gofumed
Febraayo, 2008 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Marka hore boostada ayaa falanqeeyay saldhigyada aasaasiga ah ee ArcGIS Desktop, kiiskan waxaan dib u eegeynaa kordhinta ugu badan ee warshadaha ESRI. guud ahaan qiimaha ku-kordhinta wuxuu ku jiraa $ 1,300 ilaa $ 1,800 per pc.
Qalabka falanqaynta GPS ee ArcGIS
Kordhintani waxay wanaajinaysaa habka xogta laga keenayo goobta ilaa golaha wasaaradda taas oo u oggolaanaysa in xogta si toos ah loogu kaydiyo geodatabase. Sababta oo ah falanqeeyaha GPS waxa uu ka yimaadaa qaabaynta saxda ah ee kala duwan, kaddibna farsamaynta xogta ayaa la xaqiijin karaa, taas oo hagaajineysa tayada macluumaadka iyadoo la isticmaalayo macluumaadka GPS-ga loo isticmaalo saldhigga aasaasiga ah ee laga soo qaaday internetka.
ArcGIS 3D Falanqyeeyaha ogolaanaya muuqaalaynta wanaagsan iyo falanqaynta leh sifooyinka dusha. Waxaad ka arki kartaa daydo dhul digital ah qaabab kala duwan, su'aalo weydiin, loo ogaado waxa la arki karo ka gaar ah, abuurista images of fikrado macquul isa UAN raster wadada image dushiisa iyo dariiqyada badbaadin navigation tridimencional sida haddii adiga lagaa soo duulaya in ka badan dhulka .
Falanqaynta Ganacsiga ee ArcGIS
Kordhinta Tani waxay keenaysaa qalab khaas ah oo loogu talagalay isticmaalka warshadaha suuq geynta si loo siiyo ganacsiyo go'aano caqligal ah oo la xiriira koritaanka, fidinta iyo tartanka sida:
Ogow meesha ay macaamiishu ama kuwa iibsadayaasha ah ay yihiin
Qeexaan aagagga saameynta ganacsiga
Samee falanqaynta gelitaanka suuqa
Abuurista Goobaha Awoodda leh ee Ganacsiga Cusub
Abuuri falanqaynta dariiqyada wadista wadada wadada wadada
Isku-dubarid xogta juqraafiyeed ee laga heli karo internetka
Cilmi-baarista Geevatical ee ArcGIS
Tani waa waqti dheeraad ah si ay u ArcGIS Desktop (ArcInfo, ArcEditor iyo ArcView) oo bixiya noocyo kala duwan oo qalab loogu talagalay sahaminta xogta da'ayeen, aqoonsiga caadi ahaanshaha xogta, saadaasha iyo qiimaynta la hubin in dabeecadda xogta; kuwaas waxaa loo roggi karaa daydo oo lagu wareejiyo meelaha.
ArcGis Publisher waxay bixisaa awood ay ku wadaagto oo u qaybiso maababka iyo xogta GIS. Kordhinta Tani waxay sidoo kale ku darsataa xaruntii ArcGIS Desktop ee qiime jaban ee daabacaadda xogta; adoo isticmaalaya faahfaahin dheeraad ah oo aad abuuri karto .fail faylasha ah feyl kasta .mxd. Khariidadaha la daabacay waxaa lagu arki karaa iyada oo la isticmaalayo wax walba oo ka mid ah mashiinka ArcGIS Desktop, oo ay ku jiraan ArcReader, oo ah qalab bilaash ah, si aad ula wadaagto macluumaadka dad kala duwan ama dadka isticmaala.
Falanqeeyaha Mabaadi'du waxay ku darsataa qalab horumarineed oo loogu talagalay moodeelka moodeelka ah ee liisanka mashiinka ArcGIS, sidaas darteed khariidado cusub ayaa laga soo saari karaa macluumaadka jira. Sidoo kale waa mid aad u faa'iido leh falanqaynta xiriirka ka dhexeeya iyo dhisidda moodooyinka xogta jaangooyaha oo lagu darey qalabyada falanqaynta falanqaynta sida:
Raadi jidadka ugu fiican inta u dhaxaysa laba dhibcood
Raadi goobaha xaaladaha gaarka ah
U samee labada sawir ee vector iyo raajada
Falanqaynta khidmadda kharashka ayaa la samayn karaa si loo hagaajiyo masaafada
Abuuri xogta cusub iyada oo la adeegsanayo qalab wax lagu sawiro
Qiimaynta qiimaha macluumaadka ee daraasadda meelihii ku salaysan tusaalooyinka hadda jira
Nadiifinta xogo kala duwan si ay u falanqeeyaan ama u diraan
ArcGIS StreetMaps waxay bixisaa tas-hiilaad si loo dhajiyo xogta cinwaanka nidaamyada wadooyinka ee waddanka. layers StreetMap si toos ah u maamuli tags iyo sifooyinkii tirooyinka u qaabeysan loo isticmaalaa aqoonsi juquraafi sida jidadka, jardiinooyinka, meydadka biyo, iyo calaamadaha kale. ArcGIS StreetMap leeyahay awoodaha maamul iyada cinwaanada geocoding (ilaa iyo inta dalka uu leeyahay waydaarsanayeen macquul ah), taasi oo ka isdhexgalka interactive cinwaanada shakhsiga iyo geedi socodka weyn ee aqoonsashada isbeddellada aqoonsashada tilmaamaha.
Tilmaamaha waxaa laga heli karaa meel kasta oo ka tirsan shabakada wadada
Abuurista Khariidadaha Khaaska ah
Aqoonsiga wadooyinka u dhexeeya laba dhibcood ama mid ka mid ah shabakad wadata magaalo ama inta u dhaxaysa magaalooyinka dalka.
Falanqeeyaha Baaritaanka ArcGIS
Tani waa kordhinta alaabta miisaska oo kuu ogolaaneysa inaad maareysid xogta qowmiyadeed ee kuyeelan juqraafi, si aad u muujiso xogta qiyaasta muhiimka ah iyo qoraallada khariidada.
Tan iyo xogta lagu kaydiyaa database GIS ah, labada geesaha iyo xogta geesoolayaasha, mid ka mid ah ay abuuri karaan miisaska ama saa'idka iyo fogaadaa wadataa juquraafi ujeedooyin bandhigga alaabta dhamaadka. Intaa waxaa dheer, foomamka quudinta xogta iyo isbedelka sida caadiga ah loo isticmaalo sawirka topoollada ayaa lagu daray.
Falanqaynta raadraaca ArcGIS
Kordhinta Tani waxay bixisaa qalabka loogu talagalay falanqaynta taxanaha xogta iyo dib u dhiska xisaabta. Falanqaynta falanqaynta waxay ka caawisaa aragtida xogta xogta adag, shuruudaha jahawareerka iyo soo celinta macluumaadka ilaha kale, mar walba gudaha ArcGIS.
Dhaqanka taariikhda xogta
Sawir ku salaysan qaababka ama heerarka
Eeg qaababka xogta cimilada
Isku-dubaridka xogta waqtiga GIS
Dib u isticmaal macluumaadka jira ee GIS si loo abuuro oo loo muujiyo taxanaha waqtiga
Samee khariidooyinka falanqaynta isbeddelka iyada oo loo marayo xilliyo taariikheed ama wakhtiyo dhab ah.
ArcGIS Engine waa wax soo saarka sameeysa oo pueen codsiyada GIS habka loo isticmaalo desktop ah. ArcGIS Engine ka mid ah set oo ah qaybaha in ArcGIS la dhisay, taas oo aad ku dhisi kartaa codsiyada ama la kordhiyo shaqeynayaan ee hadda jira xal bilowga ah ama isticmaala sare siinaya in isticmaalka nidaamka macluumaadka juqraafiyeed.
ArcGIS Engine wuxuu bixiyaa adeegsiga interfiyeyaasha barnaamijka (APIs) ee COM, .NET, Java iyo C ++. APIs kuma jiraan dokumentiyo faahfaahsan, laakiin waxaa ku jira qaybo muuqaal ah oo aad u horumarsan kuwaas oo u sahlaya sameynta inay sameeyaan codsiyada GIS.
Falanqeeyaha Shabakadda ArcGIS
Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa inuu abuuro shabakado xogeed oo casri ah isla markaana abuura xalal khadad. Falanqaynta Shabakada waa farsamo khaas ah oo loogu talagalay dariiqyada waxayna sidoo kale siisaa bay'ad falanqaynta falanqaynta oo ku saleysan shabakadaha, sida falanqeynta goobta, jidadka maaraynta iyo isdhexgalka ee moodooyinka caadiga ah. Kordhintaas waxay kor u qaadeysaa kartida kartida ArcGIS Desktop si loo eego kiisaska xaaladaha dhabta ah ee taraafikada ama dhacdooyinka loo maleynayo; Waxaad sidoo kale sameyn kartaa waxyaabo sida:
Falanqaynta waqtiga ee qorsheynta wadada
Qeexidda goobaha adeegga
Falanqaynta Wareegga Waddada
Lagu soo jeediyey jidad kale
Si sahlan u dhow
Falanqaynta Shabakadda ArcGIS waxay siisaa dadka isticmaala ArcGIS xarumaha si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kala duwan iyadoo la isticmaalayo shabakadaha juqraafiga. Hawlaha sida helo wadada ugu hufan safar, guud ahaan jihooyinka socdaalka, helidda jiidashada dhow ama meelaha caymiska adeegga qeexidda fasalka ku salaysan waqtiga safarka.
ArcGIS Schematics waa xal cusub oo loogu talagalay otomaatiga qaababka geodatabase ee wakiil ka soo ArcGIS. Ballaarintan waxay u oggolaaneysaa maareyn iyo maareyn wanaagsan oo ah shabakadaha xogta isku dhafan iyo fiilada sida gaaska, korontada, nidaamka tuubada, biyaha la cabbo iyo isgaarsiinta.
ArcGIS Schematics bixisaa heerka si ay u qabtaan jiilka ROI demostrabale jaantuska (jiilka si toos ah oo ay kasoo horjeeddo design dhameeya). Tani waxay u ogolaaneysaa jeeg deg deg ah isku xirnaanta gudahood network ah iyo si fudud u fahmi naqshadaha network, waayo, wareegga go'aan deg deg ah oo ku dhexsameeysmo jirka iyo diiradda on muuqaalaynta ee guud ahaan bandhig deegaanka shabakadda.
ArcPress for ArcGIS waa codsi gaar ah oo soo saaraya miraayadaha loogu talagalay daabacaadda tayo sare, labadaba daabacaadda iyo u dirista. ArcPress waxay u beddeshaa khariidado faylasha leh afka hooyo ee loogu talagalay daabacadaha ama qorayaasha, sidoo kale qaababka qaarkood oo daabacayaashu wax ka qaban karaan kala goynta midabada iyo gubashada tikidhada dambe.
Porqeu ArcPress dhigaysa nidaamka oo dhan ka computer ka, ma processing ah printer ee fasiraadda, kala iibsiga iyo kaydinta xogta loo baahan yahay, ku talinaya saarka ah si dhakhso ah si toos ah uga layers ku soo diri qaab dulinka ama qaab, halka horumarinta tayada daabacaadda.
ArcPress macnaheedu waa lacag kaydsan, sababtoo ah daabacayaasha leh awood yar oo ku saabsan xusuusta shaqada ama kaydinta waxaad daabacan kartaa alaab tayo sare leh oo ka takhalusa jadwalka PostScript.
ArcScan waa dheereeye ArcGIS Desktop kaas oo u oggolaanaya shaqada waxtarka leh ee isbedelka qaab-dhiska qaab-jajab ah, sida khariidado la xariira oo loo baahan yahay in la dhigo digitized. Inkasta oo alaabta monochromatic ay tahay mid sahlan in la automateeyo, nidaamku wuxuu sidoo kale bixiyaa qalabka qaarkood ee maareynta tones iyo isku darka midabka oo fududeyn kara digitization of data-non-monochromatic.
Isticmaalayaasha waxay ku weynaan karaan wax-ku-oolnimada ka dambeeya xog-soo-saarka xogta iyada oo loo marayo sameynta vectors iyada oo la sifeynayo manfacyada ama semi-automated.
Nidaamyada farsamaynta tooska ah oo leh heer sare oo sax ah
Abuuritaanka faylasha leh kartida shafefile ee ka muuqata muuqaalada barnaamijyada ArcGIS Desktop horey u soo qaadeen iyaga si loo hagaajiyo nadaafada iyo xogta sii socota.
Waxaad sidoo kale samayn kartaa sawirro si aad u fududeysid sawirada haddii ay dhacdo in la adeegsado qalabka gacanta.
Adeegyada ArcWeb waxay siisaa fursad ay ku helaan maadooyinka GIS iyo baahida dalabka ee labadaba macluumaadka xakamaynta ama helitaanka xog badan oo badan.
Iyada oo Adeegyada ArcWeb, kaydinta, dayactirka iyo cusbooneysiinta xogta waxaa loo maamulaa si xakameysan. Sidaas awgeed waxaa loo heli karaa adigoo isticmaalaya ArcGIS ama adeega Webka ee codsiyada loogu talagalay Intranet ama internetka.
Helitaanka Terabytes ee xogta isla markiiba meel kasta
Yaree kharashyada kaydinta iyo dayactirka
Isticmaalka sahlan ee macluumaadka macaamiisha macaamiisha ama hoosta webka.
Goobta cinwaanada ee dusha sare
Tani waa xalaad ESRI ah oo lagu diyaarinayo khariidado firfircoon iyo adeegyada ku saleysan web-ku-saleysan. ArcIMS waxay bixisaa jawi lagu cabbiri karo khariidado daabacan oo ka mid ah intranet shirkad ama internetka.
Iyada oo kordhintaan waxaad ku gaari kartaa macaamiisha balaaran oo ay ku jiraan kuwa isticmaala codsiyada websaydhka, ArcGIS Desktop iyo adeegga qalabka mobile. Sidoo kale magaalooyinka, dawladaha, ganacsatada iyo ururada adduunka oo dhan waxay daabici karaan, cilmi baaris iyo wadaagaan xogta geolotiiga ah. Adeegyadan waxaa lagu sameyn karaa jaangooyooyinka ArcGIS, ama iyadoo la raacayo ASP-yada loo adeegsan karo barnaamijyo ka socda warshadaha kale.
Muujinta muuqaalka khariidadaha iyo xogta shabakadda
Abuuritaanka hoos mara deegaan si sahlan u isticmaalida jadwalka waxay diiradda saareen heerarka shabakadda horumarinta webka.
La wadaag macluumaadka dadka kale si ay u dhamaystiraan hawlaha iskaashiga
Hirgelinta Calaamadaha GIS
ArcIMS sida liisanka shaqsi ku qiimihiisu yahay $ 12,000 inkastoo hadda ESRI iibiya ArcServer, oo ay ku jiraan waxa ay ahaayeen ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) iyo MapObjects ($ 7,000), kuwaas oo hadda at ArcServer ah kharash ku saabsan $ 35,000 by processor. Dhawaan nidaamka ruqsadda way isbeddeshay si loo yareeyo dhibaatada lacag bixinta ee processor ee server-ka.
Sidoo kale daqiiqad kale waxaanu sameynaa isbarbardhig qalabyada kale IMS, GIS, iyo software GIS lacag la'aan ah.
Post Previous«Previous Waxyaabaha ESRI, maxay yihiin?
Post Next Qoyska CadCorp ee alaabadaNext »
7 Jawaab ah "fidinta ArcGIS"
Erick isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2014 at
Hi, ku cusub ArcGIS waxaan ahaa dib u eegista buugga in la abuuro qaab iyo iyaga edit ka dib iyo in la abuuro xitaa ka dib isagoo intaa ku daray qaab hore abuuray by IGN aan ahay, kaakicin publisher waa wax qalab non-firfircoon ee bar edit ah, barnaamijka waxaa shati, waxaan u malaynayaa in aan sababta ay
ROBINSON PROAÑO isagu wuxuu leeyahay:
iga caawi inaan abuuro shabakado koronto.
Janaayo, 2009 at
AutoCAD Land waa codsi laga sameeyay Survey Civil Survey, ujeedada mihnadda madaniga ah: farshaxanka iyo qaabka waddooyinka (iyo kuwo kale).
Halkan waa link aad akhrin kartid
Ilaa hadda sida aan ogaado, ma jiro barnaamij lagu magacaabo ArcGIS Geodata.
ESRI waxay ugu yeereysaa geodatabase, qaabka lagu keydiyo xogta qarsoon ee xogta.
JESSICA IBARRA GONZALEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan kuu sheego fiis
Waxaan rajeynayaa inaan heli lahaa macluumaad ku saabsan labada barnaamij ee argis_geodata iyo autocad land
JESSICA IBARRA GONZALEZ
youtube isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2008 at
Waxaan ku darayaa kordhin dheeraad ah oo sidoo kale ka shaqeysa Erdas: Falanqeeyaha LIDAR